LaLiga Fantasy Marca, anyị nyochaa egwuregwu maka ndị hụrụ bọọlụ n'anya | Gam akporosis
Ihe egwu dị egwu bụ ọnụma niile. Na United States, ha na-eke otu otu bọọlụ basketball na bọọlụ nke ha kemgbe ọtụtụ afọ, ma ugbu a ọ bụzi Spain. Anyị na Comunio nọrọ afọ ole na ole, mana esemokwu siri ike apụtala: LaLiga Fantasy Brand.
Ngwa a dara n'ezie n'ahịa n'afọ gara aga, mana ọ bụ ngwa dị nwayọ ma dị arọ nke na-eri nanị data onye ọrụ wee wepụta nke kachasị njọ na nke ọ bụla na njehie ya mgbe niile. O di nwute na mmekorita nke Marca diri ha nma. Ya mere, taa, m wetara gị a LaLiga Fantasy Marca nyocha vidiyo nke mere na ịmara ntakịrị mma egwuregwu a na-adọrọ mmasị.
1 Gịnị bụ egwuregwu dị egwu?
2 Nyochaa ngwa LaLiga Fantasy Marca
4 Budata LaLiga Fantasy Brand
Gịnị bụ egwuregwu dị egwu?
Tupu ịmalite nyochaa ngwa m ga-akọwa kedu ihe egwuregwu dị egwu. Typesdị egwuregwu ndị a dabere na isi egwuregwu nke nnukwu egwuregwu. N'ụzọ dị otú a, e nwere egwuregwu dị egwu nke NBA, NFL ma ọ bụ na Spain ugbu a na ìgwè ndị mbụ.
Usoro ya dị mfe: Just dị nnọọ nwere ịmepụta otu akaụntụ na egwuregwu ga-akpaghị aka na-ekenye gị a usoro nke random Player nke ga-eme ka gị amalite squad.. Mgbe ahụ ị nwere ike ikpebi ndị egwuregwu ịchọrọ ịre, na mgbakwunye na ịnwe ike ịgbasa ndị otu gị site na ịbanye na ahịa.
Nyochaa ngwa LaLiga Fantasy Marca
Ọfọn, ugbu a na ịmara ihe egwuregwu ndị a bụ, enwere m ike ịga nyocha ngwa ahụ. Dị ka m kwuru n'elu, LaLiga Fantasy abanyela na akwụkwọ akụkọ egwuregwu a ma ama Marca n'oge ọhụrụ a.
Site na ebe a enwerela m ike iru nkwubi okwu abuo, otu di nma ma nke ozo adighi nma. Akụkụ dị mma na-abịa n'eziokwu na ngwa ahụ emeela ọhụụ ihu anya ma dị ezigbo mma ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga, na mgbakwunye iji budata oge nkwalite.
Dịka ị ga-ahụ na nyocha vidiyo nke LaLiga Fantasy Marca, ngwa a na aru oru ugbu a karia nke oma, ewezuga mgbe enwere egwuregwu na site na ihe m na-ahụ na-aga n'ihu na-ezu ike, na-ahapụ oge obi nkoropụ ndị ahụ mgbe ngwa dara maka izu 1, anaghị m ekwubiga okwu ókè.
Akụkụ na-adịghị mma nke njikọ a na Marca bụ nke ahụe ugbu a ndị nta akụkọ nke akwụkwọ akụkọ a ma ama na-ekere òkè na isi ndị egwuregwu ahụ. Enweghị m ihe ọ bụla megide akwụkwọ akụkọ egwuregwu, mana anyị niile maara na ebumnuche nke ụdị akwụkwọ akụkọ a na mba anyị dị obere, yabụ eziokwu ahụ bụ na ederede Marca nwere akara na akara ndị egwuregwu anyị anaghị eme m amara.
Luckily ha abughi ihe choputara maka akara ikpeazu, ya mere A na m ewere ya dị ka obere ihe ọjọọ nke bara uru iburu n'uche mmụba ama ama na ngwa nke ngwa ahụ. M na-ekwu na ọ naghị emetụta nke ukwuu ebe ọ bụ na, n'adịghị ka Comunio nke dabere na nyocha nke ndị nta akụkọ site na akwụkwọ akụkọ AS, n'ihe banyere LaLiga Fantasy Marca ihe onye ọkpụkpọ na-eme n'ọhịa nwere nnukwu ibu.
Ma ọ bụ na e nwere ndị na usoro nke ofu parameters na stipip ihe na a player na-ewe dabere na omume na ọ rụrụ; Ụzọ a Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ nọ n'ọhịa egwuregwu karịa 60 nkeji, ha akara akara. Ma ọ bụ ọ bụrụ na onye na-eche nche maka ntaramahụhụ ga-enweta akara 5. Usoro nke na-ezere enyo enyo na nyocha na-enweghị atụ ebe ọ bụ na ndị nta akụkọ Marca nwere ike inye ndị egwuregwu egwuregwu isi anọ, ya mere, dị ka m kwuru, mmetụta adịghị ka nke nnukwu onye asọmpi ya.
Iji LaLiga Fantasy Marca dị mfe: naanị ị ga - emepụta profaịlụ ọkpụkpọ ma mepụta otu njikọ n'etiti ndị enyi gị, ma ọ bụ sonye na nke emeburu. Ozugbo ị banyere n'òtù egwuregwu, a ga-ekenye gị ọtụtụ ndị egwuregwu na-akpaghị aka, na mgbakwunye na mmefu ego nke 100 nde euro iji malite ịbanye.
El A na-emelite ahịa ọ bụla 24 awa na asatọ ndị egwuregwu ọhụrụ yabụ ị ga-elele ngwa ahụ kwa ụbọchị iji chọọ ebe ahụ ịchọrọ nke ukwuu. I nwekwara ike itinye ndị egwuregwu gị ọ bụla maka ọrịre, na-aka akara ọnụahịa ị weere dị ka ihe kwesịrị ekwesị, ọbụnakwa mee ngwa ngwa ire ere na ọkara nke ezigbo ego ya, ihe na-egbu mgbu mana nke ahụ nwere ike iwepụta gị karịa otu nsogbu.
Ma ọ bụ na LaLiga Fantasy Marca ọ bụrụ na ị bịarutere n'otu ụbọchị na nkwụsị na-adịghị mma, you nwere ike ibiri ihe ruru 10% nke mmefu ego gị, ị gaghị akara. N'okwu ndị a, ọ ka mma ịre onye ọkpụkpọ karịa ịgbapụ isi, ana m agwa gị site na ahụmịhe.
Mee ka nke ahụ pụta ìhè enweghị njedebe nke ọgbakọ egwuregwu kwa profaịlụ ya mere ị nwere ike igwu egwu na ihe niile ịchọrọ n'aka otu onye ọrụ, nhọrọ dị mma nke na-enye gị ohere ịnyagharịa n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa site na egwuregwu dị iche iche ị na-ekere.
Otu n'ime ebe kachasị anya nke LaLiga Fantasy Marca bụ nke ahụ mmelite na ozugbo, ya mere omume nke ndị egwuregwu na otu gị ga-egosipụta n'oge ahụ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụhaala na ị nwere ike ịnweta ngwa ahụ ọ zara.
Ma ọ bụ na afọ gara aga ka edejupụtara ngwa ahụ n'oge egwuregwu n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na-eji ya. N'afọ a, anyị anọwo naanị otu ụbọchị ma ọ gaghị ekwe m omume ịbanye ngwa ahụ, ma ọ bụ ka ọ rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, n'oge egwuregwu. Mmechi: chefuo ihu akara na oge, ichere ka egwuregwu gwụ ma n'abali ị were nwayọ lelee ya. Ana m agwa gị site n'ahụmahụ.
Agbanyeghị LaLiga Fantasy Marca bụ ngwa zuru oke nke zuru oke karịa atụmanya. Egwuregwu dị mfe nke na-anaghị achọ nlebara anya dị ukwuu, ọ bụrụ na ị jikọọ 10 nkeji kwa ụbọchị karịrị ihe zuru ezu, yabụ ọ ga-abụ ezigbo onye enyemaka gị na oge ndị ahụ na-abaghị uru.
Nwalela ngwa ahụ? Kedu ihe ị chere banyere LaLiga Fantasy Marca?
Ọ dị nnọọ mfe ma kensinammuo
Sistemụ ntanye gị dị ezigbo mma
Ngwa ahụ na-agbagha mgbe ụfọdụ, ọkachasị n'oge egwuregwu bọọlụ
Budata LaLiga Fantasy Brand
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » LaLiga Fantasy Marca, anyị na-enyocha egwuregwu ahụ maka ndị hụrụ egwuregwu bọọlụ n'anya
Ime Anwansi Anwansi bụ ihe ọhụrụ monochrome retro platformer si Nitrome
Archos na-ekpughe ekwentị ya dị ọnụ ala, 50f Helium na 55 Helium, n'ihu IFA